Bhuku Rechipiri raSamueri 3:1-39
Imba yaDhavhidhi inowedzera kuva nesimba (1)
Vanakomana vaDhavhidhi (2-5)
Abhineri anotanga kutsigira Dhavhidhi (6-21)
Joabhi anouraya Abhineri (22-30)
Dhavhidhi anochema Abhineri (31-39)
3 Kurwisana kweimba yaSauro neimba yaDhavhidhi kwakaramba kuchienderera mberi; Dhavhidhi akaramba achiwedzera kuva nesimba,+ asi imba yaSauro yairamba ichingodzikira.+ 2 Munguva iyi, Dhavhidhi akabereka vanakomana muHebroni.+ Dangwe rake raiva Amnoni+ akaberekwa naAhinoamu+ wekuJezreeri. 3 Wechipiri aiva Kireyabhu akaberekwa naAbhigairi+ chirikadzi yakasiyiwa naNabhari wekuKameri; wechitatu aiva Absaromu+ mwanakomana waMaaka, mwanasikana waTarimai+ mambo weGeshuri. 4 Wechina aiva Adhonija+ mwanakomana waHagiti, wechishanu aiva Shefatiya mwanakomana waAbhitari. 5 Wechi6 aiva Itreyamu akaberekwa naEgra, mudzimai waDhavhidhi. Ava ndivo vakaberekwa naDhavhidhi muHebroni. 6 Hondo yaiva pakati peimba yaSauro neimba yaDhavhidhi payaienderera mberi, Abhineri+ akaramba achisimbisa chinzvimbo chake muimba yaSauro. 7 Zvino Sauro akanga ambova nemurongo* ainzi Rizpa,+ mwanasikana waAya. Gare gare Ishi-bhosheti+ akati kuna Abhineri: “Wakararirei nemurongo wababa vangu?”+ 8 Abhineri akatsamwa chaizvo nemashoko aIshi-bhosheti akati: “Ndiri imbwa* yekwaJudha here ini? Kusvikira nhasi ndanga ndichiratidza rudo rusingachinji kuimba yababa vako Sauro nekuhama neshamwari dzavo, uye handina kukutengesa muruoko rwaDhavhidhi; asi nhasi wava kunditongesa nemhosva ine chekuita nemukadzi. 9 Mwari ngaarange Abhineri zvinorwadza kwazvo kana ndikasaitira Dhavhidhi zvakapikwa naJehovha kwaari.+ 10 Akapika kwaari kuti achabvisa umambo muimba yaSauro uye kuti achasimbisa chigaro cheumambo chaDhavhidhi pana Israeri uye pana Judha, kubva kuDhani kusvika kuBheeri-shebha.”+ 11 Haana kana shoko raakazotaurazve achipindura Abhineri, nekuti aimutya.+ 12 Abhineri akabva angotuma nhume kuna Dhavhidhi, achiti: “Nyika ndeyaani?” Akatiwo: “Ita sungano neni, uye ndichaita zvese zvandinogona kuti ndiunze vaIsraeri vese kudivi rako.”+ 13 Iye akapindura kuti: “Zvakanaka! Ndichaita sungano newe. Chandiri kungokukumbira chete ndechekuti usatomboonana neni kunze kwekunge wauya naMikari+ mwanasikana waSauro paunouya kuzondiona.” 14 Dhavhidhi akabva atuma nhume kuna Ishi-bhosheti,+ mwanakomana waSauro, achiti: “Ndipe mudzimai wangu Mikari, wandakabhadharira zvikanda zvepamberi 100 zvevaFiristiya ndichivimbisa kumuroora.”+ 15 Saka Ishi-bhosheti akatuma nhume kunomutora kumurume wake, Paritieri+ mwanakomana waRaishi. 16 Asi murume wake akaramba achifamba naye, achimutevera achichema kusvika kuBhahurimu.+ Abhineri akabva ati kwaari: “Dzokera!” Iye akabva adzokera. 17 Munguva iyi Abhineri akatumira shoko kuvakuru vaIsraeri achiti: “Mava nenguva muchida kuti Dhavhidhi ave mambo wenyu. 18 Saka onai zvekuita, nekuti Jehovha akati kuna Dhavhidhi: ‘Ndichaponesa vanhu vangu vaIsraeri kubva mumaoko evaFiristiya nemumaoko evavengi vavo vese ndichishandisa ruoko rwemushumiri wangu Dhavhidhi.’”+ 19 Abhineri akabva ataura nevanhu vekwaBhenjamini.+ Abhineri akaendawo kunotaura naDhavhidhi pachivande kuHebroni, kuti amuudze zvakanga zvabvumiranwa nevaIsraeri neimba yese yaBhenjamini. 20 Abhineri paakasvika kwaiva naDhavhidhi kuHebroni aine varume 20, Dhavhidhi akaitira Abhineri nevarume vaaiva navo mutambo. 21 Abhineri akabva ati kuna Dhavhidhi: “Regai ndiende kunounganidza vaIsraeri vese kuti vauye kunashe wangu mambo, kuti vaite sungano nemi, uye muchava mambo wezvese zvamunoda.”* Saka Dhavhidhi akarega Abhineri achienda, uye akaenda murugare. 22 Panguva iyoyo, Joabhi nevaranda vaDhavhidhi vakabva vadzoka kubva kunopamba, uye vakauya nezvinhu zvakawanda zvavakanga vapamba. Abhineri akanga atosimuka kubva kuHebroni kwaiva naDhavhidhi, nekuti Dhavhidhi akanga amurega achienda murugare. 23 Joabhi+ neuto rese raaiva naro pavakasvika, Joabhi akaudzwa kuti: “Abhineri+ mwanakomana waNeri+ auya kuna mambo, iye akamurega achienda, uye aenda murugare.” 24 Saka Joabhi akapinda maiva namambo akati: “Chii chamaita? Onai Abhineri auya kwamuri. Mamuregerei achienda asina zvaaitwa? 25 Munomuziva Abhineri mwanakomana waNeri! Auya pano kuzokunyengedzai nekukuongororai uye kuti azive zvese zvamuri kuita.” 26 Saka Joabhi akabva kwaiva naDhavhidhi akatuma nhume kuti dzitevere Abhineri, dzikabva dzamudzosa ava pamugodhi wemvura weSira; asi Dhavhidhi haana chaaiziva nezvazvo. 27 Abhineri paakadzoka kuHebroni,+ Joabhi akamutora akaenda naye pagedhi kuti ataure naye vari vega. Zvisinei, akamubaya mudumbu vari ipapo, akafa;+ akamuuraya nekuti akanga auraya Asaheri* munin’ina wake.+ 28 Dhavhidhi paakazozvinzwa, akati: “Ini neumambo hwangu hatina mhosva pamberi paJehovha nekusingaperi pakuurayiwa kwaAbhineri mwanakomana waNeri.+ 29 Mhosva yacho ngaive pamusoro waJoabhi+ nepaimba yese yababa vake. Mumba maJoabhi ngamurege kumboshayika murume ane chirwere chekubuda zvinoyerera+ kana ane maperembudzi+ kana murume anoshandisa mudziyo wekugadzirisa shinda* kana munhu anourayiwa nebakatwa kana anoshayiwa zvekudya!”+ 30 Saka Joabhi nemwana waamai vake Abhishai+ vakauraya Abhineri+ nekuti akanga auraya Asaheri munin’ina wavo muhondo+ kuGibhiyoni. 31 Dhavhidhi akabva ati kuna Joabhi nevanhu vese vaaiva navo: “Bvarurai nguo dzenyu mupfeke masaga, mucheme Abhineri.” Mambo Dhadhivhi pachake aifamba ari kumashure kwehwanyanza.* 32 Vakaviga Abhineri muHebroni uye mambo akaridza mhere paguva raAbhineri, vanhu vese vakachemawo. 33 Mambo akaimbira Abhineri achiti: “Abhineri aifanira kufa sebenzi here? 34 Maoko ako akanga asina kusungwa,Uye tsoka dzako dzakanga dzisina kusungwa nezvisungo zvemumakumbo.* Wafa semunhu aurayiwa nematsotsi.”*+ Vanhu vese vakabva vamuchemazve. 35 Gare gare vanhu vese vakauya kuna Dhavhidhi kusati kwadoka kuzomupa zvekudya kuti vamunyaradze, asi Dhavhidhi akapika achiti: “Mwari ngaandirange zvinorwadza kwazvo kana ndikaravira zvekudya kana chero chinhu chipi zvacho zuva risati radoka!”+ 36 Vanhu vese vakazviona, uye zvakavafadza. Vakafara nazvo sekufadzwa kwavaiitwa nezvimwe zvinhu zvese zvaiitwa namambo. 37 Saka vanhu vese nevaIsraeri vese vakaziva zuva iroro kuti mambo haasi iye akanga aita kuti Abhineri mwanakomana waNeri aurayiwe.+ 38 Mambo akabva ati kuvaranda vake: “Hamuzivi here kuti munhu afa nhasi muchinda uye mukuru muIsraeri?+ 39 Ini nhasi handina simba kunyange ndakazodzwa kuva mambo,+ uye varume ava, ivo vanakomana vaZeruya,+ vane utsinye chaizvo.+ Jehovha ngaatsive munhu anoita zvakaipa maererano nezvakaipa zvake.”+
^ ChiHeb., “musoro wembwa.”
^ Kana kuti “zvinodiwa nemweya wenyu.”
^ ChiHeb., “nemhaka yeropa raAsaheri.”
^ Zvingava zvichireva murume akaremara aiita basa raiitwa nevanhukadzi.
^ ChiHeb., “nemhangura.”
^ ChiHeb., “nevanakomana vasina kururama.”